Halis ah in Ebola uu faraha ka baxo - BBC Somali
Image caption Cudurka Ebola ayaa ilaa haatan galbeedka Afrika ku dilay ugu yaraan 700 oo ruux.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa waxay billaabaysaa qorshe 100 milyan oo doolar ah lagu bixinayo oo lagula dagaallamayo cudurka dadka badan ku dilay Galbeedka Afrika ee Ebola.
Hay'adaha gargaarka iyo kuwa dowladaha ayaa qiray in ay la daalaa dhacayaan in ay wax ka qabtaan dhibaatada.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in boqolaal ruux oo kale oo ah dadka ka shaqeeya qeybaha caafimaadka looga baahan yahay in ay xakameeyaan waxa ay ugu yeertay xaalad aan la filayn.
Agaasimaha Guud ee hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO, Margaret Chan, ayaa waxa ay maanta la kulmaysaa madaxweynayaasha Liberia, Sierra Leone iyo Guinea, si ay uga wadahadlaan cudurka Ebola ee ka dilaacay Galbeedka Afrika.
Waxa ay rajaynaysaa in hay'addaha ka shaqeeya caafimaadka dadweynaha ee dunida ay gacan ka gaysan doonaan in ay keenaan boqolaal shaqaalaha caafimaadka ah si ay u daweeyaan dhibanayaasha cudurkan dilay in ka badan 700 oo ruux tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan.